Sida loo adeegsado istiraatiijiyad waqti-go'an badan marka la ganacsanayo FX | FXCC Blog
Aug 12 Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • 960 Views Comments Off Ku saabsan Sida loo shaqaaleeyo istiraatiijiyad waqti-go'an badan marka la ganacsanayo FX
Waxaa jira tiro aan xadidneyn oo habab aad u isticmaali karto si farsamo ahaan aad u falanqeyso suuqyada FX. Waxaad xoogga saari kartaa hal waqti oo cayiman oo waxaad adeegsan kartaa tusayaal farsamo oo fara badan iyo ficil-cabbir qafis, iskuday inaad qiyaasto jihada qiimaha. Haddii kale, waxaad adeegsan kartaa farsamo gacmeed hoos loo dhigay oo leh tusayaal farsamo oo aad u yar oo tusahaada ku jira oo u kuurgali kara tillaabo-dhowr ah waqtiyo badan.
Ma jirto qaab sax ah ama khalad ah oo falanqaynta farsamada ah haddii aad caddeyn karto in: habkaaga, istaraatiijiyaddaada iyo geeskaagu ay shaqeynayaan. Haddii aad macaashka bangiga si joogto ah iyo si isdaba joog ah u taageerayso hab ku celcelis ah, markaa sidaad ku timid xaaladdaasi waa mid aan muhiim ahayn. Ma jiraan qaabab buug oo la xaqiijiyay oo lagu ganacsado FX iyo suuqyada kale, istaraatiijiyaddu waa mid aad u sareeya, haddii ay kuu shaqeyso dhammaan xaaladaha suuqa ka dibna sii wad. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaabab gaar ah oo ganacsato badan oo khibrad leh ay had iyo goor kugula talin doonaan, sidaas darteed, iyada oo lagu saleynayo xikmadda dadweynahu waa in ay ansax ku tahay hababka qaarkood.
Hal joogto ah ayaa weli ku jira dhammaan qaababka falanqaynta; Ganacsadayaashu waxay rabaan inay si sax ah u aqoonsadaan marka isbeddelku bilaabmay, ama marka dareenka suuqyadu is beddeleen. Habka ugu cad uguna doorbida badan ayaa ah in la qodayo waqtiyada si loo ogaado waqtiga saxda ah ee uu isbedelku dhacay. Waxaad noqon kartaa ganacsade isbeddelaya oo marqaati ka ah isbeddel-tallaabo isbeddel ah oo ku saabsan hab-dhaqanka shaxanka 4hr, oo markaa bilaabaya inuu falanqeeyo jadwalka waqtiyada ugu hooseeya isagoo isku dayaya go'aaminta nuxurka isbeddelka dareenka. Waxaad noqon kartaa ganacsade maalinle ah oo indha indheeya isbedelka ku yaal shaxda 1hr, kaas oo markaa u qulqulaya shaxda shanta daqiiqadood isla markaana kor ugu sii socota geesaha si uu u falanqeeyo jadwalka waqtiga sare sida shaxanka maalinlaha ah, oo isku dayo inuu sameeyo haddii ay jiraan wax Calaamadaha muuqda ee dhaqdhaqaaqa labada wakhti ee sare iyo kan hooseba.
Waxa la raadinayo
Tusaale ahaan, haddii aad tahay ganacsade maalinle ah oo raadinaya inuu ku dheeraado xasillooni sida EUR / USD, waa inaad raadsataa caddeyn muujineysa in ficil-celinta sicir-bararka uu ka dhacayo ama ka dhacayo waqtiyo badan. Ficilkan bulsheed ee lagu muujiyey qaababka laambadlaha ayaa ka duwanaan doona waqtiyada kala duwan, in alla inta ay yeelan doonto kala duwanaan qarsoon. Xilliga maalinlaha ah iyo waqtiga 4hr waxaad arki kartaa caddeyn ujeedka dareenka, tusaale ahaan, qaabab kala duwan oo laambadaha doji.
Shumacyadaan caadiga ahi waxay muujinayaan suuq wanaagsan oo dheellitiran oo ganacsatada si wada jir ah u miisaamayaan xulashooyinkooda kana baaraandegaan mowqifyadooda. Shumacayaasha doji waxay sidoo kale muujin karaan isbeddel, tusaale ahaan waxay noqon kartaa isbeddel ka yimaadda dareenka beecshadda ama dhinacyada ganacsiga suuqa, illaa culeyska dareenku uu keenayo jihada qiimaha inay beddelaan si ay u noqdaan cagajugleyn.
Xilliyada hoose waxaa laga yaabaa inaad raadiso hannaan laambad oo joogto ah oo si cad u muujinaya in qiimaha uu ku kacayo heer kacsanaan leh. Tani waxay noqon kartaa qaabab dhismeedka guud ee dabiiciga ah oo la ilaaliyo, ama waxaad si muuqata u arki kartaa ficil bulsheed qaab qaab ah seddex askar oo caddaan ah. Waxa kale oo aad u fiirsan kartaa isbeddel ku yimaadda qaab dhismeedka dusha sare ee ku dhammaanaya waqti cayiman maadaama hoos udhac culus la duubay.
Waa masuuliyad saaran ganacsadaha shaqsiga inuu tijaabiyo oo uu ku shaqeysto waqtiyo kala duwan iyadoo la adeegsanayo borotokoolka gadaal u dhaca, si loo ogaado haddii isbedel dareen uu dhacay. Haddii aad si cad u arki karto isbeddel ku dhaca wakhtiga 1hr waa inaad falanqeeysaa jaangooyada sare iyo kan hoose si aad u aragto haddii aad garan karto qaabab kala duwan oo lagu taageeri karo aragtidaada. Mar alla markii aad aamminto inaad tahay qof karti leh waxaad bilawday inaad horumariso qayb muhiim ah oo ka mid ah falanqaynta ficilkaaga qiimaynta, markaa waxaad ku jirtaa xaalad fiican oo aad fikradaada ku meelmarin karto suuqyada tooska ah.
« Aqbalaada waxa aad xakamayn karto marka aad ka ganacsato FX wuxuu muhiim u yahay horumarkaaga Difaac naftaada marwalba marka aad ka ganacsaneyso FX »